2010-02-07 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Dial up connection ​ဖြင့် ​အင်​တာ​နက်​သုံး​သူ​များ ​လိုင်း​အား ​ပို​ကောင်း​လာ​အောင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​သင့်​သ​လဲ။
​ဒါ​လေး ​က​တော့ ​လက်​ဖြစ်​လေး​ပေါ့. ​အင်​တာ​နက် ​လိုင်း​အား ​ဘယ်​လို ​ကောင်း​လာ ​အောင် ​လုပ်​ရ​မ​လဲ၊ ​ဆို​တာ​လေး​ကို video ​ဖိုင်​လေး​နဲ့ ​ပြ​ထား​တာ​ပါ။ ​လက်​တွေ့ ​အ​သုံး​ချ​ကြည့်​ပါ။ ​သုံး​ရ​တဲ့ ​အင်​တာ​နက်​လိုင်း​ဟာ ​ယ​ခင်​က​နှင့် ​ယ​ခု ​ယှဉ်​ကြည့် ​လိုက်​ပါ။ ​ဒီ​နည်း​လေး​ဟာ ​တစ်​ကယ့်​ကို ​လွယ်​ကူ​တယ် ​ဆို​ပေ​မယ့် ​အ​ထင်​မ​သေး ​ပါ​နှင့် ​တ​ကယ့်​ကို ​အင်​တာ​နက် speed ​မြန်​လာ​ပါ ​လိမ့်​မယ်.
​လ​ပြည့်​ဝန်း : ​အစ်​ကို​ရေ win rar ​က ​ဖိုင်​ဖြေ​တဲ့ ​အ​ခါ​မှာ error ​ပဲ ​ပြ​နေ​တယ် . ​ကူ​ညီ ​လို့​ရ​ရင် ​ကူ​ညီ​ပေး​ပါ​ဦး .
​တစ်​ချို့​သော Rar ​ဖိုင်​များ​ကို ​ဖိုင်​ပြန်​ဖြေ​တဲ့​အ​ခါ​မှာ error ​ဖြစ်​ကြ​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒါ​က​လဲ win rar ​ရဲ့ ​အား​နည်း​ချက် ​တစ်​ခု​ပါ . ​အဲ့​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့ ​အ​နေ​ဖြင့် ​အဲ့​ဒီ့ ​ဖိုင်​ကို ​တစ်​ခြား​နေ​ရာ​တွေ​က​တေ ​လိုက်​ရှာ​ပြီး Download ​ပြန်​လုပ်​ယူ​တဲ့ ​နည်း​ကို ​မ​သုံး​ဘဲ​နှင့် Win Rar ​ထဲ​မှာ​ပဲ​ပါ​တဲ့ Repair Tools ​နဲ့​ပဲ ​ဖြေ​ရှင်း​ကြည့်​ရ​အောင် ​ဒီ​နည်း​ကို​လဲ ​အ​ရင်​က ​ရေး​ခဲ့​ပြီး​ပါ​ပြီ . ​အ​ခု​က ​နှစ်​နည်း​နှင့် ​ရေး​ပြ​လိုက်​ပါ့​မယ် .
​မိ​မိ error ​ပြ​နေ​တဲ့ Win Rar file ​ကို ​ဖွင့်​လိုက်​ပါ (Double click)
Tools >> Repair Archive (​သို့) Tools Bar ​မှာ ​သူ​နာ​ပြု logo ​ပုံ​စံ​လေး​နှင့် Repair Archive tool ​ရှိ​ရင် ​အ​ဆို​ပါ Tool ​ကို ​နှိပ်​လဲ​ရ​ပါ​တယ် .(​ပုံ-၁)
(​ပုံ-၂)​မှာ​လို​မျိုး ​မိ​မိ save ​ချင်​တဲ့ ​နေ​ရာ​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ .
(​ပုံ-၃) ​မှာ​လို​မျိုး ​အား​လုံး​ပြီး​သွား​ရင် Done ​ဆို​တဲ့ ​စာ​တမ်း​ပေါ်​လာ​မှာ​ပါ . ​အဲ့​ဒါ​ဆို​ရင် Close ​ပေး​လိုက်​ပါ.
​ဖိုင်​ကို ​ပြင်​ပြီး​သွား​ရင်​တော့ (​ပုံ-၄)​လို​မျိုး ​ဖိုင်​အ​သစ်​တစ်​ဖိုင် ​မိ​မိ save ​ထား​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ ​ရောက်​လာ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ် .
​ဒီ​နည်း​နှင့်​ဖြေ​ရှင်း​ဖို့​က​တော့ ​အောက်​မှာ​ပေး​ထား​တဲ့ Rar Repair tool ​ကို Download ​လုပ်​ပြီး​တော့​မှ ​ဖြေ​ရှင်း​လို့​ရ​မှာ​ပါ.
version 4.0 ​ကို ​တင်​ပေး​ထား​ပါ​တယ် . ​လုပ်​ရ​မှာ​က ​အောက်​က​ပုံ​တွေ​ထဲ​က​အ​တိုင်း ​တစ်​ဆင့်​ချင်း​လုပ်​သွား​လိုက်​ပါ .
​အောက်​မှာ​ပေး​ထား​တဲ့ Repair tool ​ကို Download ​လုပ်​ပြီး . ​စက်​မှာ install ​လုပ်​လိုက်​ပါ.
(​ပုံ-၁) ​မှာ​လို Browse ​က​နေ error ​ပေါ်​နေ​တဲ့ rar ​ဖိုင်​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ
(​ပုံ-၂) ​မှာ​လို ​သိမ်း​ဆည်း​မည့် ​နေ​ရာ​တစ်​နေ​ရာ​ကို ​ရွေး​ပေး​လိုက်​ပါ။
(​ပုံ-၃)​မှာ​လို ​ဖိုင်​ပြင်​တဲ့ ​လုပ်​ငန်း​စဉ် ​ပြီး​ဆုံး​သွား​ကြောင်း ​တွေ့​ရ​မှာ​ပါ. ​အား​လုံး​ပြီး​သွား​ရင်​တော့ ​မိ​မိ​သိမ်း​ခဲ့​တဲ့​နေ​ရာ​မှာ win rar ​ဖိုင်​အ​သစ်​က​လေး ​တစ်​ဖိုင်​ကို ​တွေ့​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ် .